Navotsotra Ilay Bilaogera Ejypsiana Monem · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraFreedom For Egyptians
Voadika ny 27 Mey 2017 6:08 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Mey 2007 ny teny anglisin'izy ity)
Nihatra tamin'ireo bilaogera manana fironana ara-politika samihafa ny famoretana azy ireo vao haingana. Avy ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana voaràra ao Ejypta ilay bilaogera Ejipsiana Abdul Monem Mahmood izay efa nogadraina nandritra ny 46 andro noho ny fanehoan-kevitra ara-politika. Na izany aza, bilaogera maro avy amin'ny fironana ara-politika samihafa no nampiseho fanohanana tsy misy fanavakavahana an'i Monem.
Araka ny hita ao amin'ny bilaogin'i Monem, any am-ponja iharan'ny fepetra feno habibiana izy, tsy navela hanatrika ny fanadinany fianarana ambony izy ary zara raha nahavita nitsidika ny rainy marary, andro vitsy lasa izay.
Nandre ny vaovao momba ny famotsorana an'i Monem miaraka amin'ny ahiahy manoloana ny tsy fahatokisana ny fiarovana Ejypsiana ireo bilaogera Ejiptiana. Nilaza i Nora Younis fa “tampoka ny fanapahan-kevitra hamotsotra an'i Monem, tahaka ilay didy fanagadrana ihany … mbola matahotra aho. Tsy te hiarahaba an'i Monem aho raha tsy mahita azy mihitsy ny masoko.”
Tao amin'ny lahatsoratra bilaogy teo aloha mitondra ny lohateny hoe: “Fahalalahana ho an'ny Aterineto“, nilaza i Jar El Kamar fa ny antony ao ambadiky ny fanagadrana an'i Monem dia ny lahatsoratra blaoginy momba ny fampijaliana ataon'ny fiarovam-panjakana aminy, ny fandraisana anjarany amin'ny fihaonambe, ary noho ny izy mpanao gazety mavitrika miaro ny zon'olombelona. Nilaza i Jar El Kamar hoe: “ny fiandronan'ny fahatsapana tahotra dia mitarika fanivanan-tena henjana … malahelo aho satria ny hany toerana hahatsapako fahalalahana dia voahodidina ankehitriny.”
Ny famotsorana an'i Monem tamin'ny Asabotsy dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny dingana raisina ho an'ireo bilagoera hafa izay maneho hevitra malalaka ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Ejiptiana, izay manazava ny antony nahatonga ny vaovao noraisina tamim-pahanginana, ahiahy na tsy tazana mihitsy ny fanehoana hafaliana. Niteraka ohatra ara-pitsarana ho an'ireo bilaogera Ejyptiana mba hampisy ny sivana ny hany dingana mazava hatramin'izao.